JEEGAAN IYO II BIJI AAN KUU BIJEYEE , LABA ISBAHAYSI OO XARAAN AH
Saturday February 06, 2021 - 20:14:21 in Maqaallo by Wariye Tiriko
In kasta oo isbahaysiga siyaasadu uu yahay wax caadi ah oo dunida oo dhan ka jira, haddana marka uu ku salaysan yahay qabiil ee anu ku fadhiyin mabaadii waa wax aad u fool xun si gaara dhaqanka Somaliland ee markiisa horeba qabiilku dishooday. Kala qaybsnaanat ay abuurtay siyaasadii foosha xumayd ee Jeegaantu waa mid weli raad ku leh siyaasadda Somaliland.
Muddo badan ayaynu ilaahay ka baryeynay in siyaasadda hab beeleedka iyo qori isu dhiibka ee Jeegaantu ay soo af jaranto. Nasiib wanaag, waynu arkaynay inay soo burburayso muddooyinkii dambe, arrintaana waxa ammaanteeda leh Madaxweyne Muse Biixi oo intii uu xilka hayay ku dadaalay in isbahaysigaa dulmiga ku dhisani meesha ka baxo.
Nasiib darradase dhacday waxay tahay waxa lagu beddelay isbahaysi kale oo isna beelaysan oo baraha looga bixiyey II BIJI AAN KUU BIJIYEE oo iyadu laftigeedu keeni karta kala qaybsnaan tii hore ka weyn iyo dulmi hor leh. Isbahaysagan csusubi waa mid ka sii qaab daran kii hore ee jeegaantii burburtay. Isbahaysiga jeegaantu wuxuu ahaa mid dalka, bari iyo galbeed fidsan oo inkastuu dadkii kal qaybiyey haddan aan dalka kala qaybin. Isbahaysigan cusubi isagu dadkii iyo dalkiiba waxaad mooddaa inuu kala qaybinayo. Waxayna u muuqataa inuu weliba fursad aan ku talo gel ahayn siiyey Jabouti oo weligeed ku taamaysay siday Somaliland shafka dhulka ugu dhigi lahayd iyo Somaliya oo iyadu cadowga kowaad ee Somaliland.
Waxaynu hadda arkaynaa siyaasiyiin uga dhex ololayna Somaliland doorshada Madaxeyne Jabouti iyo kuwa ka difaacaya eedaynta Somaliya u soo jeedisay . Dhinaca kale iyana la arkayaa dad u tafaxaydan sidii Somaliya mashaariic degaanadooda ugu maalgelin lahayd.